Sameecadaha oo aan iska saaray daraadood ayaan ku badbaaday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay fredag 7 april 2017 kl 20.17
Nasiib ayaan ku baxsaday
Dad ka baxsanaya goobtii uu falku ka dhacay. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Hal ruux ayaa illaa iminka inta la caddeeyey ku geeriyooday cusbitalka, halka ay saddex horay u geeriyoodeen. Cusbiltalka ayey sidoo kale ku jiraan 15 ruux oo 9 ka mid ahi dhaawac yihiin iyo labana dhallaan.
Kadib fal lagu tuhun-san yahay inuu salka ku hayo falalka argagixis-nimo ee ka dhacay bartamaha magaalada Stockholm galabta abbaaraa saddexdii galab-nimo, sida uu sheegay dhakhtar sare
Veronica Durango oo ku sugneeyd goobta uu falka ku dhacay ayaa ku badbaaday maadaama ay iska saartay sameecadihii dhagaha ugu jiray ee telefoonka. Waana midda dhalisay inay maqasho guuxii gaariga dadka lagu laayay oo dabadeed ay dhinac isaga tuurtay, hase yeeshee haweenay ka dambeeysay uu gaarigu ku haleelay oo ay ku geeriyootay:
- Waxaan maqlay gurxankii gaariga. Mana aanan maqleen sawaxankaa haddii ey sameecaduhu dhegaha iigu jiri lahaayeen.
- Markaasi oo aan dhinac isku tuuray. Haweenaydii iga dambeeysay ma aanay ka badbaadin. Gadaal ayaan ka ogaaday inaan laba haween dhexdooda ku beegnaa. Labadaa ayayna jugtii ugu horeeysay haleeshay. Haddii aanan dhinac isku tuureen, kama aan badbaadeen. Haweenaydii kalese way geeriyootay, sida ay sheegtay Veronica Durango oo nasiib wanaag uga badbaaday gaarigii dadka ku laayay faras-magaalaha Stockholm.
Ciidanka ammaanka ayaa xaqiijiyay inay xaafadda Märsta oo dhacda waqooyiga magaalada Stockholm ay gacanta ku dhigeen nin la sheegay in lagu tuhun-san yahay inuu gacan ku lahaa falkii galabta ka dhacay faras-magaalaha Stockholm.
fredag 7 april 2017 kl 19.19
fredag 7 april 2017 kl 17.10
Falkii argagixisada ee ka dhacay Stockholm